ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်း - စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှသည်အဖြစ်မှန်သို့ (Simon Lajeunesse) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
comments: Lajeunesse ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ်စာနယ်ဇင်းသို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းကြည့်ပါ။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးသူလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားကျောင်းသား ၂၀ ကိုပါမောက္ခ Lajeunesse ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခဲ့သည် ဆောင်းပါး Link ကို
ညစ်ညမ်းမှာတစ်ပုလ်ကြည့် - စိတ်ကူးယဉ် မှစ. လက်တွေ့ဘဝမှ
S.-L. Lajeunesse, ပါရဂူဘွဲ့, 1, , ,
J.-M. Deslauriers, ပါရဂူဘွဲ့2
Volume ကို 22, Issue 1ဇန်နဝါရီလ-မတ်လ 2013, စာမျက်နှာများ 32-41 Doi: 10.1016 / j.sexol.2012.08.019
လူပျိုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပေါ်သို့အဖြစ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုအပေါ်သို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်။
ကြားနေကျန်ရှိသော၏မျက်နှာကို ထောက်. အဘို့နှင့်မဆိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားရန် တစ်ဦး, ဒီသုတေသနညစ်ညမ်း ပတ်သက်. ပုံမှန်အတိုင်းစေတယ်ကျော်လွန်သွားပါရန် grounded သီအိုရီကိုအသုံးပြုသည်။ 18-25 အကြားနှစ်ဆယ်ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲ 20 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြီးကြပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်အတွင်းထိုအဘာသာရပ်များအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။
ထိုသူအချို့တို့သည်အဘို့, ညစ်ညမ်းကနဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးပုံစံဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တခြားသူတွေကို၎င်း၏ခေါ်ဆောင်သွားရှုထောင့်မှသာအကြာတွင်ပေါ်လာသည်။
ဒါဟာအချို့အချိန်ပြီးနောက်, ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့, တစ်ခါတစ်ရံအချို့အဟောင်းများကိုစိတ်ကူးယဉ်မြင်ယောင်နှင့်ရန်အသုံးပြုကြောင်းပုံရသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပေါင်းစည်းမှုသည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စက၎င်း၏ function ကို - သတင်းအချက်အလက်, ပညာရေး, တစ်သိချင်စိတ်သို့မဟုတ် arousal ၏စိတ်ကျေနပ်မှု - ညစ်ညမ်းသည်ဤလုလင်တို့သည်စိတ်ကူးယဉ်၏ဤပုံစံမှဘယ်လောက်အကြွေးမပေးပါဘူးအဖြစ်သာ, ခဏထွက်ပေါက်အချို့မျိုးမှစောဒနာပုံရသည်။ တကယ်တော့သူကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလူငယ်များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောနှင့် diachronic စပ်လျဉ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပုံရသည်။ ဒါဟာသုတေသနကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထူးကိစ္စများ masculinity ဖို့အဆင်ပြေအောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်း Les effets de l'အသုံးချ de la ညစ်ညမ်း sur Les Scripts, CARRIER sexuelle, က de jeunes homme ရင်းနှီးသော et ဆက်ဆံရေး။
အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု 20, 18 အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်တူချစ်သူ 25, XNUMX နှင့် XNUMX နှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများအနေဖြင့်လိင်တူချစ်သူများအနေဖြင့်လိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်အရလိင်အရလိင်အရဆက်ဆံမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အချို့သော jeunes, elle serait, au ပွဲဦးထွက်, Une Form d'Education sexuelle သွန်းလောင်း။ d'autres encore, elle n'acquiert က de ရည်ညွှန်းérotique Que ပေါင်း tard သွန်းလောင်း။ par la suite ကို, la ညစ်ညမ်း constituerait un moyen က de visualiser des fantasmes qu'ils avaient déjàစိတ်ကူးစိတ်သန်း, et elle leur fournirait parfois des manières Precision က de les réaliser။
plusieurs လောင်း la တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ et ညစ်ညမ်း se confondent ။ ပြန်ကြားရေး, ပညာရေး, စိတ်ကျေနပ်မှု d'Une curiosité ou စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, la fonction de la ညစ်ညမ်း ne se résumerait, aux yeux des cette à homme, qu'à un ယခုအချိန်တွင် d'ရှောင်တိမ်းမှုတွေကို, ceux-ci n'accordant en ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် Que peu က de crédibilité jeunes form d'ပုံရိပ်။
il semble en fait Que l'အသုံးပြုမှု de la ညစ်ညမ်း s'inscrive dans Une စပ်လျဉ်း dynamique et diachronique chez Les jeunes ။ Cette recherche permet က de concevoir des ကြားဝင် aux problématiquesပုလ်adaptées။
1 လူမှုရေး, professeur Associates à l'universitéက de Montreal, simonlouislajeunesse.com ဝန်ဆောင်မှု။
2 လူမှုရေး, professeur à l'université d'Ottawa ဝန်ဆောင်မှု။